Beertone ဘီယာအရောင် Swatches - ဒီဇိုင်းမဂ္ဂဇင်း
ဘီယာအရောင် Swatches Beertone သည်ဘီယာအရောင်အမျိုးမျိုးကိုအခြေခံသည့်ပထမဆုံးရည်ညွှန်းလမ်းညွှန်ဖြစ်ပြီးဖန်ခွက်ပန်ကာဖြင့်တင်ပြသည်။ ပထမဆုံးထုတ်ဝေရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆွစ်ဘီယာပေါင်း ၂၀၂ မှသတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းပြီးနိုင်ငံတစ်ဝှမ်း၊ အရှေ့၊ အနောက်မှမြောက်၊ မြောက်မှတောင်သို့ခရီးသွားကြသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးသည်အချိန်များစွာနှင့်အသေးစိတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အချိန်ယူရသော်လည်းဤကိလေသာနှစ်ခု၏ရလဒ်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုအလွန်ဂုဏ်ယူစေပြီးနောက်ထပ်ထုတ်ဝေမှုများကိုစီစဉ်ထားပြီးဖြစ်သည်။ ရွှင်လန်း!
စီမံကိန်းအမည် : Beertone, ဒီဇိုင်နာနာမည် : Alexander Michelbach, သုံးစွဲသူ၏အမည် : Beertone.
ဘီယာအရောင် Swatches Alexander Michelbach Beertone